China Ziso mumvuri Kugadzira uye Fekitori | Wangtong
Vanotanga kushandisa maziso emumvuri nhanho pikicha.
Maitiro ekudhira zuva nezuva zvigadzirwa ziso mumvuri
Nhanho 1: Uchishandisa rakakura ziso mumvuri bhurasho, isa yakajeka-ruvara base base mumvuri pamusoro peziso zvigadziko uye kutsvaira maziso.
Enda kune yakajeka-yakajeka kana matte eye mumvuri iyo isina kunyanya kusviba.
Nhanho yechipiri: shandisa kara yaunofarira kudzika kumagumo kweziso, teerera kune shoma shoma yekufukidza, asi zvakare kakawanda kumucheto kwekufenda, kuzvimba kwemaziso emucheche kusvika pazvinogona kudzivirira pearl mumvuri weziso unogona kuva.
Nhanho 3: Nyorera iwo iwo iwo wakafanana mumvuri weziso senge weDanho rechipiri nebhurashi rakadzama kudzamisa pasi peziso.
Nhanho 4: pakupedzisira maererano nemaitiro avo pane eyeliner brashi pane mascara inogona kuve, haizodhirowa eyeliner mwana haidhori ziso mumvuri zvakare zvinogoneka, akadai ezuva nezuva ekugadzira ziso mumvuri haisi yakapusa.
Vanotanga kushandisa maziso emumvuri nhanho pikicha
Iyo yakakosha poindi yevatangi kudhiza yakanaka ziso mumvuri ndiko kuwanda kufukidza kweziso mumvuri. Matte eye mumvuri ndiyo yakanyanya kuomesa kufukidza. Kufukidzwa kweparera ruvara kunogona kuita kuti ziso riwedzere kumira
Nhanho 1: iyo eyebrow fomu yakadhonza zvinoenderana neyako eyebrow, sarudza peni yetsiye inotumira ruvara kuti utore furemu resiye nenzira kwayo.
Nhanho yechipiri: Sarudza yekuvanza base iri padhuze neyako toni toni yekuvhara eyelid mabara.
Nhanho 3: Yakasviba poda yekuvhara iyo eyelid kupenya, izvi zvinogona kuita kuti ziso kugadzirwa riwedzere, usaite dzungu makeup.
Nhanho 4: Isa matte mwenje mutsvuku weziso mumvuri nebrashi uye ishandise kune eyelid seye yepasi ruvara. Isa mumvuri pasi pecheki reziso.
Nhanho 5: yepakati flat eye eye mumvuri bhurasho mumusoro uye muswe weziso, iko iko kungangoita haidi dhayi.
Nhanho 6: Waini tsvuku yeziso mumvuri bhurasho mune yekumashure netriangle yeziso uye ndokudzika, idiki pane nakare, ichiri kusada kufenda.
Nhanho 7: Munwe wemasimba ese wakadzoka. Dhidza mumumvuri wegoridhe ziso mumvuri uye riise pakati peziso rako.
Nhanho 8: sarudza yakakodzera dhizizi yekubata brashi, muganho weziso mumvuri dzungu kubata kunogona.
Nhanho 9: Nyorera champagne yegoridhe mumvuri weziso zvakare, dab pakati peziso rako.
Nhanho yegumi: dhirowa wakanaka mukati nekunze mutsara weziso, besmear eyelash, ziso rekugadzira rakavezwa.
Pashure: Liquid hwaro